မန်းသားလေး| November 16, 2012 | Hits:1
| | ဖုန်းလေလံပွဲမြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
မြန်မာနယ်စပ်တွင် အထူးကုန်သွယ်ရေးဇုန်များဖွင့်ရန် ထိုင်းကြိုးစားအမေရိကန် အထည် ကုမ္ပဏီ Gap မြန်မာ စက်ရုံများအား စာရင်းစစ်မှု ထုတ်ပြန်JICA ၏ စီမံကိန်းက ပဋိပက္ခများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ဟု တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ဆိုရေနံ၊ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း စာချုပ်များတွင် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် သက်ရောက်မှုများ ထည့်သွင်းရန်လိုမြန်မာ့ဆန်ဈေးကွက် တရုတ်နိုင်ငံကိုပဲ အားကိုးနေမလား
မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 17, 2012 - 3:22 am ဖုန်းနံပါတ်က နံပါတ်ပါပဲ။ ကိုယ့်နံပါတ် လူမှတ်ရလွယ်တော့ အနှောက်အယှက်ပေးချင်သူတွေ တချိန်လုံး လှဲ့နေ၊ ခေါ်နေမှာ မစိုးရိမ်ဘူးလား။
Reply Nyein November 17, 2012 - 10:03 am What’s kind of people are too much rich & How they get the money to waste meaningless things ?
Reply Myat Noe November 17, 2012 - 9:43 pm How funny it is. Only Chinese and Burmese will do this kind of idiotic thing.
JICA ၏ စီမံကိန်းက ပဋိပက္ခများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ဟု တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ဆို
မြန်မာ့ဆန်ဈေးကွက် တရုတ်နိုင်ငံကိုပဲ အားကိုးနေမလား
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ရုန်းကန်နေရ
အစိုးရသစ် စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ခရီးမတွင်